Okulandelayo | Umcimbi Keynote Somlomo
Siyabonga ngokukhetha ukusebenzisana nesipikha samazwi esiyisihluthulelo uCheryl Cran ngomcimbi wakho olandelayo. Lapha uzothola konke okudingayo ukuze ulungiselele ukuba noCheryl njengesikhulumi esiyisihluthulelo seqembu lakho. Silangazelela ukukusiza udale isipiliyoni somhlangano esiyingqayizivele!
Bona wonke amavidiyo
Landa Umhlahlandlela Wethu Wempahla Yokuhlangana
Waziwa njengomgqugquzeli weKusasa Lomsebenzi ongu- # 1 ngu-Onalytica, nombhali wezincwadi eziyi-9 kufaka phakathi uhlelo lwesibili lwe- “NextMapping ™ - Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi” nencwadi ehambisana nayo.
Izithombe zokuphrinta nezewebhu
Ngeminye imininingwane yokuthi uCheryl angayenza kanjani inkambiso yenkulumo eyisihluthulelo yomcimbi wakho olandelayo xhuma nathi namuhla.